ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Foreign Policy သို့ ပေးပို့သော ဗွီဒီယိုအမှာစကား ~ Nge Naing
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Foreign Policy သို့ ပေးပို့သော ဗွီဒီယိုအမှာစကား
Wednesday, December 01, 2010 Nge Naing3comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Foreign Policy သို့ ပြောကြားသော စကားကို အင်္ဂလိပ်လို နားထောင်ရ အခက်အခဲရှိသူများ အဆင်ပြေစေရန် နားလည်သလို ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့စကားတွေက ရိုးရိုးဝါကျ သိပ်နည်းပြီး Complex sentences တွေက ပိုများလို့ တခြားသူတွေ ပြောတဲ့ စကားထက် ဘာသာပြန်ရ ပိုခက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဘာသာပြန် သမားတယောက်မဟုတ်ဘဲ ၀ါသနာအရသာ နားလည်သလို ဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စကားထောက်နေတာ အဓိပါယ်လွဲချော်နေတာ တွေ့ရင် ဘယ်သူမဆို အပြုသဘောနဲ့ ထောက်ပြ ပြုပြင်ပေးပါက ကြိုဆိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို စာသားကို အောက်ဆုံးမှာ ဖေါ်ပြထားပြီး အင်္ဂလိပ်လို စာသားနဲ့ ဗွီဒယိုကို ကိုနစ်နေမန်း ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Video Message from Daw Aung San Suu Kyi to FP (Foreign Policy)
ဒီနေ့မှာ အခုလို သင်တို့ကို နှုတ်ခွန်းချွေစကား မြွက်ကြားခွင့်ရတာဟာ အင်မတန်မှ နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းလှပါတယ်။ အကယ်၍များ သင်တို့နဲ့အတူ ကျမ လူကိုယ်တိုင်လာပြီး ပြောဆိုခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီထက်မက ၀မ်းမြောက်စရာ ကောင်းမှာ အမှန်ပဲ။ ကျမကို ကမ္ဘာထိပ်တန်း အတွေးအခေါ် ပိုင်ရှင်တယောက်စာရင်းထဲမှာ ရွေးချယ်ဖေါ်ပြခြင်း ခံရတာကို သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ မောက်မာခြင်းကင်းလျက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုစာ ကာလအတွင်း ကျမရဲ့ဘ၀က အတွေးအမြင် ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် ရှုမြင်သုံးသပ်အဖြေရှာတဲ့ အချိန်ကာလနဲ့ အကောင်အထည်ဖေါ်စရာတွေ လက်မလည်အောင် များလွန်းလို့ အတွေးအမြင်တွေကို တွေးတောကြံဆဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ ကာလ နှစ်ခုကြားမှာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရပေမဲ့လည်း အဲဒီကာလတွေအတွင်း ကျမနဲ့အစဉ်မပြတ် အတူရှိနေတဲ့ အတွေးတခုကတော့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တိုးတက်မှုရှိဖို့ဆိုတာ ကျမတို့အားလုံး အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ် ဆိုတဲ့အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နဂိုကတည်းက သူ့အလိုလို ရှိနေတဲ့ အတွေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ လူသားတွေအတွက် ခွန်အားကို တိုးပွားစေဖို့၊ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကူညီမှုအတွက် တဦးဆီကတဦး အပြန်အလှန် သင်ယူလေ့လာနိုင်ဖို့ လူသားမျိုးနွယ်တွေနဲ့အတူ ရှင်သန်လာတဲ့ အတွေးအခေါ် လို့ ကျမထင်ပါတယ်။ ဒီအတွေးအခေါ်ဟာ ဘယ်တော့မှ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ မသွားပါဘူး။ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ အပြောင်းအလဲတွေ များစွာနေရာယူလာတဲ့ အချိန်ကလဖြစ်တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်ကာလအတွင်း ကျမ တွေးခဲ့တဲ့ အတွေးတွေကို သင်တို့နဲ့တွေ့ပြီး ပြောဖြစ်ခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ ကျမဆန္ဒဖြစ်မိတယ်။
ဒီလ ၁၃ ရက်နေ့က ကျမ အထိန်းသိမ်းခံရာက ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျမကိုယ်ကျမ ရုတ်တရက် ကမ္ဘာအသစ်တခုကို ရောက်လာသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကျမဆီ လာရောက်ထောက်ခံ အားပေးပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်လာကာ ကျမတို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အရေးကိစ္စတွေကို ဆက်လက်ယုံကြည့်နေသူတွေအထဲမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေက အလုပ်အတူလုပ်လာခဲ့ ကျမရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေထက် များစွာ ငယ်ရွယ် နုပျိုကြတဲ့ လူငယ်များစွာကို တွေ့ရပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်တွေအားလုံး ဒါမှမဟုတ် မျိုးဆက်သစ်များစွာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် ကျမတို့နဲ့အတူ လာရောက်ပူးပေါင်းကြတော့ နုပျိုသစ်လွင်တဲ့ ကမ္ဘာလေးတခုပါပဲ။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီလိုလာရောက်ကြတဲ့ လူငယ်တွေဟာ IT ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးမှာ IT ပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျမထက်များစွာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေကြတာကို တွေ့ရတော့ ထူးဆန်းအံ့ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာသစ်ကြီးပါပဲ။ ဒီအခြေအနေတွေက ကျမကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စေတယ်။ အားပေးနေပါတယ်၊ အားတက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ IT နည်းပညာက ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို ဖြစ်စေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုကလည်း မတူကွဲပြားတဲ့ လူထုတွေနဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ မျိုးဆက်တွေအကြား ဆက်ဆံရေးမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အကမ္ဘာထိပ် အတွေးအခေါ်ရှင် တယောက်ရဲ့ စကားဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး။ ကျမ ပြောနိုင်တာကတော့ ကျမဟာ သင်တို့ဆီက သင်ကြားမှုကို ခံယူဖို့၊ သင်ယူလေ့လာဖို့၊ အတွေးအခေါ် အသစ်တွေဆီကို လူငယ်တွေဆီမှ သင်ယူဖို့၊ ကျမအချုပ်ကျနေစဉ် ကာလအတွင်း လွတ်လပ်တဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ သူတွေဆီက ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ လေ့လာသင်ယူပြီး အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေကနေ တဖန် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကာ သင်ယူလေ့လာဖို့ ကျမအဆင်သင့် ဖြစ်နေပါတယ် ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ အဖန်တလဲလဲ ပြန်လည်တွေးတော ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေရမှာ ဖြစ်တယ်။ တွေးတောဆင်ခြင်ဆန်းစစ်မှုဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ဆုံခန်းသွားတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အဆုံးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ကောက်ချက်ရယ်လို့လည်း ဘယ်တော့မှ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။ ဒါသည်ပင် ကျမတို့ရဲ့ နှလုံး၊ စိတ်ဝမ်းထဲမှာ ဘက်ပေါင်းစုံနဲ့ ရှေ့ဆက် တွေးတောဆင်ခြင်သုံးသပ်ကာ သွားနေရမည့် လူသားသဘာဝရဲ့ အလှတရား ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောခဲ့တာတွေက အတွေးအခေါ်သမားတယောက်ရဲ့ အတွေးအမြင်အနေနဲ့ သင်တို့အား ကျမလှစ်ဟ ဖေါ်ပြခြင်းတော့ မဟုတ်ပါ၊ ကမ္ဘာလောကနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကင်းကွာနေပြီး အခုမှ ပြင်ပလောကကို ရောက်ရှိလာသူတယောက်က သင်တို့နဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းပြီး သင်တို့ရဲ့ အထောက်အပံ့၊ အကူအညီ၊ အကြံအဥာဏ်နှင့်မိတ်ဆွေအဖြစ်ကို လိုအပ်နေတဲ့ သူတယောက်က တွေးတဲ့ အတွေးအမြင်မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ကမ္ဘာထိပ်တန်း အတွေးအခေါ်သမား တယောက်ရဲ့ စကား ဟုတ်မဟုတ် မသိမေပဲ့ ကျမပြောခဲ့တာ အားလုံးက ကျမရဲ့ နှလုံးသားထဲကလာတာ ဖြစ်ပြီး ဒီအပေါ်မှာ သင်တို့က ကြင်နာစွာနဲ့ ရှုမြင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်။ များစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Foreign Policy မဂ္ဂဇင်းကြီးသို့မြန်မာပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပေးပို့ ခဲ့သော ဗွီဒီယိုစကားပြောမှတ်တမ်းအား ဒေါင်းလုပ် လုပ်လိုပါက - http://www.multiupload.com/495GZ8CF6K
Posted in: ဗွီဒီယို,မှတ်တမ်း,ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
December 9, 2010 at 12:44 PM Reply
I think she is out of touch with reality since she was out of the world for many years. Still she can think and can talk academically.
ဘလော့ဂါ ငယ်နိုင်က အန်တီညု ကို သက်သက် စော်ကားတာပဲ.... အန်တီညုက မြန်မာလို မပြောတတ်တဲ့လူမှမဟုတ်တာ... မြန်မာအချင်းချင်း မြန်မာလိုမပြောချင်လို့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောတာကို ဘာသာပြန်ပြီး ချရေးတယ်ဆိုတာ စော်ကားတာပဲ...။ မြန်မာစကားလုံးဝ မတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ပြောသွားလို့ မြန်မာလို့ ပြန်ရေးပြီးတင်ရင်တော်သေးတယ်...
December 22, 2010 at 1:29 AM Reply
ဒေါ်လာစား ဆိုတဲ့မောင်တွေလို နအဖ အောက်ဆွဲ၊ သန်းရွှေဖိနပ်ကိုင်မောင်တွေရဲ့ ဗဟုသုတ ကင်းမဲ့ပုံ၊ ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက် ပုံကတော့ သြချရလောက်တယ်။ အခုပို့စ်မှာပါတဲ့ ဗီဒီယို မက်ဆေ့က ဘယ်ကိုပို့တဲ့ဟာဆိုတာ တကယ်မသိပဲ ရမ်းသမ်းရှုတ်ချအပြစ်တင်နေတာ သိပ်ရီစရာကောင်းတယ်။ အဲဒီ Foreign policy ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာလဲ၊ ဘာလို့ ဒေါ်စုကပို့ရတာလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး တချက်လောက်ပြန်ရှာကြည့်လိုက်၊ မင်း Googling တော့ လုပ်တတ်တယ်မလား၊ English လို Keyword သေချာ ရိုက်ထဲ့တတ်ရင်တော့ ရှာတွေ့မှာပါ ကောင်လေး၊ ကြိုးစားအုံးကွာ။